Ubuninzi bezindlu kunye nenkcazo yoko bakuko | Ezezimali
IMisa yeLifa leMveli
IClaudi Casal | | Uqoqosho ngokubanzi, iinkampani
Zonke iiasethi zenkampani zinokuhlelwa ngokwamaqela, ngokwamacandelo ngokwemo yezemali abahlala kuyo. Nganye kwezi iindawo ezabelana ngeempawu ezifanayo Banokudityaniswa babe ngamaqela amakhulu, apho ubukhulu becala kukho uninzi olukhulu. Ezi zihlanti zintathu ziphambili ezikhoyo zezo zeasethi, ezamatyala, kunye nezo ze ixabiso elifanelekileyo.
Kule nqaku siza kubona ukuba ngalinye lala macandelo lahlulwe njani. Ke ukuba into nganye ye-asethi iqokelelwe ndawonye iya kusikhokelela kulawulo olukhulu ngokwazi ukuba zisetyenziselwe ntoni iimali, zeziphi izibonelelo ezifumanekayo, okanye iintlawulo ezisalindelweyo.
1 Ii-asethi kunye neeasethi zazo
2 Amatyala neeasethi zawo
3 Ubulungisa kwiNet
4 Iphepha leBhalansi libulela kwii-Asethi
Ii-asethi kunye neeasethi zazo
Impahla yexabiso imele zonke iiasethi namalungelo enkampani, yonke into eyeyayo. Isusela kwifenitshala yeofisi, ukuya emhlabeni, imali okanye imali ebhankini, iilayisensi zokusebenza, amalungelo awodwa omenzi wechiza okanye izixhobo zekhompyuter. Uluhlu lude, kwaye kubuninzi beasethi enkulu yahlulwe yangamacandelo amabini, iiasethi zangoku nezingezozangoku.
Okwangoku kuyasebenza: Ikwabizwa ngokuba ziiasethi zangoku, iiasethi ezikhoyo ngoku yenye yeeasethi ezimbini ngaphakathi kweeasethi eziqulethe izinto eziqinisekisa ukusebenza kwenkampani yonke imihla. Zixeshana elifutshane, kwaye ubunini bayo bungaphantsi konyaka. Oovimba abanokuthi basetyenziswe, njengempahla ekrwada, okanye bathengiswe, njengemveliso yokugqibela. Olu tyalo-mali luyasebenza, kwaye iiasethi zangoku zinokuhlelwa ngokweendidi ezi-3. Izitokhwe, ziyafumaneka kwaye ziyafumaneka.
Ii-asethi ezingasebenziyo ngoku: Ikwabizwa ngokuba zii-asethi ezingashukumiyo, ezingezizo ezangoku zingaphakathi kwenqwaba yeeasethi eziqulethe izinto ezigcinwe kwinkampani ixesha elingaphezulu konyaka omnye. Kuzo sinokufumana zonke iiasethi ezivumela inkampani ukuba igcine amandla emveliso. Akukho lutyalomali lucwangciselwe ukuba lube sisigxina, kwaye ukuthengiswa kwezi zinto akuqwalaselwanga. Ii-asethi ezingezizo ezangoku zidweliswe zaba ziibhloko ezi-3. Ii-asethi ezingaphathekiyo, ipropathi, oomatshini nezixhobo kunye notyalo-mali lwexesha elide.
Amatyala neeasethi zawo
Amatyala yenye yee-asethi ezinkulu ezintathu apho Zonke iindleko kunye namatyala afakiwe. Oko kukuthi, ukuba i-asethi iphela inika ingxelo ngayo yonke inzuzo kwinkampani, uxanduva kukuchasana kwayo. Ngokwesiqhelo la matyala aneempawu zeentlawulo zangoku nezexesha elizayo ngenxa yokusebenza kwemali eyadlulayo. Kuxhomekeke kubume beeasethi, inokudibaniswa ibe ziiasethi ezimbini, ezamatyala angoku kunye nalawo angekhoyo ngoku.
Amatyala angoku: Kuquka onke loo matyala okanye iintlawulo ekufuneka inkampani ijongane nazo kwi ixesha elingaphantsi konyaka omnye. Banikwa ingxelo ngentlawulo kubanikezeli ngeempahla, ababolekisi, iirhafu ezivela kulo msebenzi.
Amatyala angekhoyo ngoku: Onke loo matyala okanye iikhredithi kunye nolunye uxanduva kunye ukuvuthwa okungaphezulu konyaka omnye. Ngokwesiqhelo sisiphumo sotyalo-mali kunye nokwandiswa kwemisebenzi okanye ukuqala kweshishini. Iintlawulo kubanikezeli abanokuvuthwa kwexesha elide ngaphezulu konyaka omnye zinokungena kule mali.
Kwakhona ebizwa ngokuba yimali yakho, Yenziwe ngemali eyinkunzi enikelwe ngamaqabane kunye noovimba inkampani ebibe nakho ukuqokelela kule minyaka idlulileyo. Yinto ekwi-balance sheet emele zonke izixhobo ezinazo inkampani. Ukuze ukwazi ukuyibala, kwanele nge thabatha onke amatyala kwiiasethi zenkampani. Emva kokufumana umohluko, eyokugqibela kwezi-3 zezinto eziphambili ezinokufakwa yinkampani, zexabiso lilonke, ziyafunyanwa.
Ukuba ufuna ukuphanda ngakumbi malunga nokuba i-net ixabisa ntoni, kukho ikhonkco apho sithethe khona ngokude ubude nobude. Kule nqaku ungafumana iinkcukacha ezithe kratya malunga nokuba iiasethi kunye namatyala akuvumela njani ukuba uchonge imeko yezemali yenkampani.
Ubulungisa, konke malunga nokuba kusebenza njani
Iphepha leBhalansi libulela kwii-Asethi
Iphepha lomncono sisampulu yemeko yezoqoqosho nezemali yenkampani ethile ngexesha elinikiweyo. Ngenxa yento yokuba iiasethi kunye nexabiso liza kutshintsha ngokuhamba kwexesha (nangaphezulu kwixesha elide), ibhalansi izama ukubonisa ixabiso elipheleleyo lenkampani ngomhla othile.
Injongo yayo kukulungelelanisa ixabiso lelifa lemveli ngokwahlula iiMassrimialial Masses ezahlukeneyo. Icwangcisiwe ukusuka kumdibaniso wolwazi lobalo-mali lwexesha lezoqoqosho. Olu lwazi luvela kumaxwebhu aqhubekayo okuthumela, ayincwadi noludwe jikelele.
Injongo elandelwa ngumncono kukuhlanganisa zonke ezi asethi.. Inamacandelo amabini, olotyalo-mali okanye iiasethi, kwaye okokugqibela lelona xabiso liphambili lokugcina. Nangona kunjalo, badityaniswe baba zii-asethi eziphambili ezintathu ezichazwe apha ngasentla, zeeasethi, amatyala kunye nexabiso lilonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » iinkampani » IMisa yeLifa leMveli